သတင်း - အတုလုပ်ပြီးနောက် ဘီးအတုပြုလုပ်သည့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အခြေအနေ
ဘီးအတုပြုလုပ်ခြင်းသည် အဓိကအားဖြင့် အပူပေးခြင်း၊ ပုံပျက်ခြင်းနှင့် အအေးပေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက်သည်။ဘီးပုံသွင်းခြင်းများသည် ပစ္စည်းဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ဘီးပေါက်ခြင်း၏အရွယ်အစားကြောင့် မတူညီသောအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအခြေအနေများကိုပြသသည်။အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် အောက်ပါအချက်နှစ်ချက်ရှိသည်။
1. ကြီးမားသော ဘီးအတုများ၏ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အခြေအနေ
ဤဘီးအတုများကို ယေဘူယျအားဖြင့် စတီးလ်များတိုက်ရိုက် ဖောက်လုပ်ခြင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းသည်။ဖောက်လုပ်ရာတွင် အပူပေးသည့် အရေအတွက် များသော (မီး6ကြိမ်နှင့်အထက်) ကြောင့် အတုလုပ်ခြင်း၊ မညီမညာ ပုံပျက်ခြင်း၊ ကြီးမားသော အပိုင်းပိုင်း ကွဲလွဲမှုများ နှင့် မြင့်မားသော ပစ္စည်း သတ္တုစပ်ခြင်း တို့ကြောင့်၊ ဘီးကြီးများ အတုလုပ်ခြင်း၏ အထင်ရှားဆုံး အင်္ဂါရပ်မှာ ကျန်ရှိသော ဟိုက်ဒရိုဂျင် ပါဝင်မှု မြင့်မားပြီး၊ ပြင်းထန်သောဖွဲ့စည်းပုံ၏မညီမညာ။ဖြစ်တည်မှု (ရောစပ်ပုံဆောင်ခဲဖြစ်စဉ်) သည် ကြီးမားသော ဘီးထုခြင်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေသည့် အရေးကြီးသော အချက်ဖြစ်သောကြောင့် ကြီးမားသော ဘီးပေါက်ခြင်း၏ အပူကုသမှု လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည့် ပြဿနာတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။
2. အသေးစားနှင့် အလတ်စား ဘီးအတုများ၏ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အခြေအနေ
ဤဘီးပေါက်ခြင်း အမျိုးအစားကို အဓိကအားဖြင့် လှိမ့်ထားသော ပရိုဖိုင်များ အတုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။hypoeutectoid သံမဏိများ (အလတ်စား ကာဗွန်သံမဏိ၊ အလတ်စား ကာဗွန်နည်းသော အလွိုင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာသံမဏိ) အတွက် နောက်ဆုံး အတုလုပ်ပြီးနောက်၊ အခန်းအပူချိန်သို့ လေအေးသွားသောအခါ၊ ကြမ်းပြီး ကြီးမားသော ferrite နှင့် Lamellar pearlite တည်ဆောက်ပုံ၊hypereutectoid သံမဏိများ၊ အထူးသဖြင့် ကာဗွန်မြင့် နှင့် သတ္တုစပ် သံမဏိများ အတွက်၊ နောက်ဆုံး အတုလုပ်ပြီးနောက် နှေးကွေးသော အအေးခံမှုသည် ယေဘူယျအားဖြင့် ပိုကြမ်းသော ရောနှောထားသော ပုံစံကို ရရှိနိုင်သည်။ထို့အပြင်၊ ဘီးပေါက်ခြင်း၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် ဖြတ်ပိုင်းခြားနားချက် နှင့် ထိန်းချုပ်၍မရသော အအေးပေးခြင်းများကြောင့် ဖွဲ့စည်းပုံသည် မကြာခဏ မညီမညာ ဖြစ်နေသည်။တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ အပူချိန်ဖိစီးမှု ( thermal stress ဟုခေါ်သည် ) နှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဖိစီးမှုတို့ကြောင့် ဘီးအတုပြုလုပ်ခြင်းများတွင် ကျန်ရှိသောအတွင်းပိုင်းဖိစီးမှုများကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သဖြင့် ၎င်းတို့အား ကုသရန်အတွက် အပူကုသမှုကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။မြှင့်တင်ပြီး ဖယ်ရှားပစ်ပါ။
ဘီးအတုပြုလုပ်ခြင်း၏ အပူကုသမှုသည် ဘီးပေါက်ခြင်း အမျိုးအစားနှင့် အပူကုသခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ဘောင်များကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ပုံဖော်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ကုန်ကြမ်းများအပေါ် အခြေခံထားသည်။အဓိကအားဖြင့် အပူအပူချိန်၊ အချိန်နှင့် အအေးခံနှုန်း၊ အပူပေးခြင်းနည်းပညာနှင့် အအေးပေးခြင်းနည်းပညာ၊ အပူပေးကိရိယာများ၊ အပူအမြန်နှုန်း၊ အပူပေးစနစ်နှင့် အအေးပေးကိရိယာ၊ အအေးခံကိရိယာ၊ အအေးခံကိရိယာ၊ သတ္တုပုံသဏ္ဍာန်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ဘီးအတုပြုလုပ်ခြင်း၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများကို ရရှိရန်၊ .စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအသုံးပြုပါ။ပစ္စည်း၏ အလားအလာကို အပြည့်အဝကစားပါ၊ အပူကုသမှုချို့ယွင်းချက်များ (ပုံပျက်ခြင်း၊ ကွဲထွက်ခြင်း၊ ကွဲအက်ခြင်းနှင့် ပုံမှန်မဟုတ်သောဖွဲ့စည်းပုံစသည်ဖြင့်) ကိုရှောင်ကြဉ်ပါ ထို့ကြောင့် အပူကုသမှုသည် ဘီးအတုပြုလုပ်ခြင်းအတွက် အလွန်အရေးကြီးပြီး မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အအေး၊ ပူပူ၊ ဘီးပေါက်ခြင်းအားလုံးနီးပါးသည် အရည်အချင်းပြည့်မီသော အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်လာစေရန် အပူကုသမှုကို ဖြတ်သန်းရမည်ဖြစ်သည်။အပူကုသမှုနည်းပညာအဆင့်သည် အစိတ်အပိုင်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်၊ တိကျမှု၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို သေချာစေပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်အတွက် အဆုံးအဖြတ်ပေးသည့်အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ကုန်ကြမ်းများ၊ အပူပေးခြင်း၊ အတုလုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် အအေးပေးခြင်းတို့သည် ဘီးအတုပြုလုပ်ခြင်း၏ အပူကုသမှု အရည်အသွေးကို ထိခိုက်စေပါသည်။နှစ်ခုက နီးနီးကပ်ကပ် ဆက်စပ်နေပြီး ခွဲလို့မရပါဘူး။